झगडामै बिताए नेपाली कलाकारले लकडाउनको ६ महिना, के के भए लफडा ? - Samajik Patra
झगडामै बिताए नेपाली कलाकारले लकडाउनको ६ महिना, के के भए लफडा ?
कोरोना भाइरसका कारण नेपाली सिने उद्योग थला परेको छ, तर चलचित्रकर्मी भने सिर्जनात्मक काममा भन्दा विवादमै रुमल्लिए।
- गत असारमा अभिनेत्री दीपाश्री निरौलाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा अभिनेता राजेश हमाललाई भन्ने गरिएको ‘महानायक’ सम्बोधनमाथि प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले हमाललाई ‘महानायक’ पत्रकारले बनाइदिएको आशय व्यक्त गरेकी थिइन् । उनको यस्तो अभिव्यक्तिको भिडियो क्लिप सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो । यो विषयले नेपाली चलचित्र क्षेत्र विभाजित बन्न पुग्यो ।
- नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले नायिका वर्षा राउत आलोचित बनिन् । एक युट्युब च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले सीमा विवादका कारण भारतीय साथीहरूसँग कुरा गर्न गाह्रो भइरहेको र भारतीय साथीहरूलाई पनि गाह्रो भइरहेको आशयको अन्तर्वार्ता दिएकी थिइन् । सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई उडाउन र ट्रोल गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । पछि उनले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै माफी माग्नु पर्‍यो ।
- अभिनेत्री साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहले इन्स्टाग्राममार्फत एक भिडियो सार्वजनिक गर्दै नेपाली सिने उद्योगमा काम गर्ने व्यावसायिक वातावरण नभएकाले आफू कुनै पनि ब्यानरमा नदोहोरिएको बताइन् । उनले आफूलाई धेरैपटक दुव्र्यवहार भएको र अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गरेको पनि खुलासा गरिन् । उनले आफूलाई कसले दुव्र्यवहार गरेको भनेर नाम नखुलाए पनि अभिनेता भुवन केसी साम्राज्ञीविरुद्ध उत्रिए । आफ्नो चरित्रहत्या भएको भन्दै उनले चलचित्र संघमा निवेदन दिए । त्यसपछि अदालतमा गए, दश करोड क्षतिपूर्तिको मागसहित । यो विषयमा पनि नेपाली सिने क्षेत्र दुई धारमा विभाजन भयो ।
- अर्की अभिनेत्री पूजा शर्माले १४ जिल्ला र ७२ प्रदेश भनेर दिएको भिडियो अन्तर्वार्ताको क्लिप पनि भाइरल बन्यो । मुलुकको प्रशासनिक विभाजनबारे राम्रो ज्ञानसम्म नभएको भन्दै उनको ट्रोल बनाइयो । शर्माको अभिव्यक्तिले पनि महिनादिनजति सिने उद्योगलाई ततायो । यसबीचमा पूजा र पत्रकार प्रकाश सुवेदीबीच विवाद भयो । यो विवादले सिने क्षेत्र नै बाँडियो । पछि आपसी सहमतिमा विवाद टुंगियो ।
बुधवार, आश्विन ७ २०७७०७:४१:५६
भुवन केसी साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाह
नया दशैं-तिहार गीत ‘नबस्नु है पर्खि’ सार्वजनिक (भिडियोसहित )
स्मिता दाहालको नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)